United Airlines na -enye koodu PayPal QR dị ka nhọrọ ịkwụ ụgwọ ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » United Airlines na -enye koodu PayPal QR dị ka nhọrọ ịkwụ ụgwọ ọhụrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
United Airlines abụrụla ụgbọ elu izizi iwebata koodu PayPal QR dị ka nhọrọ ịkwụ ụgwọ ọkụ-yana ma ọ bụ na-enweghị Wi-Fi.
Onyinye ịkwụ ụgwọ na-enweghị mmetụ aka ọhụrụ na-enye ndị ahịa ohere ịzụta nri, ihe ọ drinksụ ,ụ na ihe ọghọm ndị ọzọ mgbe ha nọ n'ụgbọ site na inyocha koodu QR.
Ndị njem United Airlines nwere ike iji nhọrọ ịkwụ ụgwọ koodu QR ọhụrụ PayPal-yana ma ọ bụ na-enweghị Wi-Fi.
Mmekọrịta ga-amalite na Chicago n'ọnwa na-abịa wee gbasaa na sistemụ niile tupu ngwụcha afọ.
United na PayPal kwupụtara taa ụzọ ọhụrụ maka ịzụrụ ihe na-enweghị mmetụ, ọbụlagodi na mpaghara enweghị Wi-Fi. Malite n'ọnwa na -abịa, ndị ahịa United na ụgbọ elu ahọpụtara nwere ike igosi onye na -ahụ maka ụgbọ elu koodu PayPal QR na ngwa PayPal wee jiri ya zụta nri, ihe ọ drinksụ andụ na ihe ọghọm ndị ọzọ mgbe ị nọ n'ụgbọ.
United Aghọọla ụgbọ elu izizi iwebata Koodu QR PayPal dị ka Nhọrọ Ịkwụ Ụgwọ
United Airlines bụ ụgbọ elu mbụ nyere PayPaKoodu QR, na mmekorita a bụ akụkụ nke United dị mfe iji, ụlọ ọrụ na-eduga ụlọ ọrụ nke ngwaọrụ ịkwụ ụgwọ na-enweghị kọntaktị. United bụ ụgbọ elu mbụ nyere ndị ahịa nọ n'ụlọ akụ na ụba nhọrọ ịhazi nri na ihe ọveraụveraụ site na ngwa na weebụsaịtị, wee nyekwa ndị ahịa ikike ịchekwa ozi ịkwụ ụgwọ na obere akpa dijitalụ.
PayPal Enwere ike iji Koodu QR na ụgbọ elu ahọpụtara na -apụ na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Chicago O 'Hare na Nọvemba na tupu ngwụcha afọ, ga -agbatị na ụgbọ elu niile gafee netwọkụ niile ebe ịkwụ ụgwọ enweghị kọntaktị dị.
Toby Enqvist, onye isi ndị ahịa maka United Airlines. “PayPal bụ onye mmekọ dị egwu na teknụzụ a na -enye ndị ahịa anyị ụzọ ọzọ dị mfe iji zụrụ ihe, ọbụlagodi mgbe ha na -anọghị n'ịntanetị. Anyị na -atụ anya iwebata ndị ahịa anyị nhọrọ ọhụụ na ihe ọhụrụ karịa site na mmekorita anyị na PayPal. ”
Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị, budata ngwa PayPal wee tọọ usoro ịkwụ ụgwọ kachasị amasị gị maka ịkwụ ụgwọ koodu QR, tupu ịpụ n'ọnụ ụzọ ámá.
Iji zụọ ihe ọghọm, pịa bọtịnụ 'Jiri koodu QR kwụọ ụgwọ'.
Wee pịa bọtịnụ 'Ịzụta ụgbọ elu'.
Gosi onye na -ahụ maka ụgbọ elu koodu QR ka o nyocha.
Chọọ nnata nkwenye email mgbe ị rutere.
Frank Keller, osote onye isi oche nke Ngwọta ngalaba nke ụlọ ọrụ yana azụmaahịa dijitalụ na PayPal. "Iwebata Koodu QR PayPal na-eme ka nkwenye anyị dị ike n'inye ndị ahịa nhọrọ ma na-enye ndị na-azụ ahịa ọkwa ọhụrụ nke enweghị mmetụ mgbe ịzụrụ ụgbọ elu, n'ime ngwa PayPal ha maara ma tụkwasị obi."
October 27, 2021 na 07: 27
Anyị na-atụ anya iwebata nhọrọ ọhụrụ na nke ọhụrụ maka ndị ahịa anyị. Ụgbọ elu ahụ bụkwa nke mbụ nyere ndị njem akụ na ụba ohere ịtụ ụzọ nye nri nri na ihe ọṅụṅụ site na ngwa United na webụsaịtị.